Maitiro ekushandura yako Android kuita bootable pendrive | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekushandura yako Android kuita bootable pendrive
Joaquin Garcia | | Resources
Iko kuisirwa kwekugovera kutsva chinhu chiri nyore kwazvo uye zvine hupfumi kana isu tine pendrive. Kuuya kwe USB ndangariro kwakaita kuti tikwanise kuisa chero kugoverwa kweGnu / Linux tisingatengi kutenga diski kana DVD yekuisa. Kugona kudzima uye kushandisa seyeuko kana kungoitira kumwe kugovera.
Nekudaro, isu hatisi nguva dzose tine usb tsvimbo paruoko uye izvo zvinogona kuve dambudziko. Zvezviitiko izvi pane mukana wekushandisa iyo Android smartphone seye bootable pendrive uye gadza yatinoda kugovera pane chero komputa, zvese pasina kutyora kana kukuvadza iyo smartphone.
Kune izvi isu tinongoda smartphone ine Android iyo yakadzika midziiyo Drive-Droid application, tambo yeUSB uye iyo ISO mufananidzo weiyo Gnu / Linux kugovera yatinoda kuisa. Kana tangova nezvose izvi, isu tinofanirwa kutanga tave nechokwadi chekuti bhatiri reiyo smartphone rakazara zvakazara. Ipapo, isu tinotamisa iyo ISO mufananidzo wekuparadzira kuneyeuchidzo yeiyo smartphone.
Kana tangova nezvose izvi, tinoenda kuGoogle Store uye isu tinoisa iyo DriveDroid app, Anwendung inoshandura ndangariro yeiyo smartphone kuita pendrive inotakurika. Kana tangoisa iyo app, tinoimhanyisa uye ichatibvunza midzi mvumo, chimwe chinhu chinowanzoitika mune akawanda maapp. Isu tinozvipa uye ipapo meseji ichaonekwa muChirungu ichikumbira isu ISO mufananidzo wekuparadzira.
Isu tinotsvaga kuburikidza nemuongorori weapp. Mushure meizvozvo anotibvunza ndeipi nzvimbo yatinoda kupa kumufananidzo weIO. Zvenguva izvo zvakaringana kuti isu titi ndiyo sarudzo ye USB Misa Kuchengeta. Izvi zvinokwana. Iye zvino tinofanirwa kubatanidza iyo smartphone kune komputa neiyo usb tambo.
Isu tinotangazve komputa uye tigoita kuti itakurise iwo bootable mayunitsi kutanga, saka mutoro wekugovera watakaisa pane iyo smartphone unozoonekwa, nhare inomhanya Android seye bootable pendrive. Maitiro aya akareruka uye anoshanda nekuti zvichatibvumidza kuita kumisikidza kwakawanda kwekuparadzirwa kweGnu / Linux sekuda kwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekushandura yako Android kuita bootable pendrive
Mutambi anoita "simulator" achishandisa SteamOS uye DiRT Rally
GCompris: suite yedzidzo kune idiki imba